Volvo Opens Showroom in Mandalay | Myanmar Business Today
Home Automobile Volvo Opens Showroom in Mandalay
Volvo Opens Showroom in Mandalay
Zin Thu Tun/Myanmar Business Today
Volvo distributor Performance Auto International openedashowroom in Mandalay on November 23.
The showroom on Thiekpan road will showcase XC90, XC60, XC40, S90 and V40 Cross Country with prices ranging from $55,000 to $220,000.
“The new showroom will give new experience to our buyers as it is close to our customers in Upper Myanmar,” said Jakob Olsson, Market Area Director of Volvo Cars.
Besides sales of SUV crossover, estate hatchback and sedan, among other models, the showroom will also handle maintenance and spare part sales.
The Swedish car company entered the Myanmar market in March 2017 and appointed Performance Auto International,ajoint venture between Wai Family Company Limited and the UMG conglomerate, as its sole distributor in the country.
Volvo’s first showroom, on Dhamazedi Road, Bahan Township, Yangon, sold 54 luxury cars between March 2017 and March 2018.
Volvo Cars Showroom ကို မန္တလေး၌ ဖွင့်လှစ်
ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် ထိပ်တန်းမော်ဒယ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သော Volvoမော်တော်ယာဉ်များကို ရောင်းချမည့် Volvo Cars Mandalay Showroom ကို Performance Auto International ကုမ္ပဏီက နိုဝင်ဘာ(၂၃)ရက်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Volvo Cars Mandalay Showroom ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမှတ်(၁၅) ၊ သိပ္ပံလမ်း ၊ ရဲမွန်တောင်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Volvo ကားမော်ဒယ်များဖြစ်သော အင်ဂျင်ပါဝါ (၂၀၀၀)ရှိသည့် XC90၊ XC60၊ XC40၊ S90 နှင့် V40 Cross Country မော်တော်ယာဉ်များကို ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကားဈေးနှုန်းများမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၀၀၀ မှ ၂၂၀၀၀၀ အတွင်းရှိသည်။
“ အခု showroom အသစ်ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဝယ်ယူအားပေးသူဖောက်သည် တွေနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်လာတဲ့အတွက် ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်စွာနဲ့ ဝယ်ယူစီးနင်းသူကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု Volvo Cars ၏ Market Area Director ဖြစ်သူ Jakob Olsson ကဆိုသည်။
ရောင်းချသော Volvo မော်ဒယ်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ SUV Crossover ၊ Estate Hatchback နှင့် Sedan အမျိုးအစားသုံးမျိုးထဲမှာ မော်တော်ယာဉ်များကို ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းအနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းချပေးခြင်းစသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်း၌ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ၂၀၁၇ခုနှစ်မတ်လက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သော Volvo Cars Corporation သည် တင်သွင်းဖြန့်ချိရောင်းချသူအဖြစ် Wai Family Company နှင့် UMG Company တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း ထားသော Performance Auto International Company အား တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ်၌ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအရောင်းပြခန်းကို အမှတ် ၁၄၆(က)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သော ၂၀၁၇ခုနှစ်မတ်လမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်မတ်လအထိ တစ်နှစ်အတွင်း Volvo ဇိမ်ခံကားအစီးရေ(၅၄)စီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း Volvo Myanmar ကထုတ်ပြန်ထားသည်။
Previous articleHyundai HasaWinner in Tucson 2020
Next articleMytel, MBAPF to Provide Digital Literacy Training to 14 Universities